हाँसेर छुट्टिएको छोरा अर्कैको घरमा मृत भेटिए, सञ्जीवको हत्या भएको हैन भनेर कसरी पत्याउने ? « Dainik Online
पथरी । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का १८ वर्षीय सञ्जीव भण्डारी गत आइतबार (पुस १२ गते) घरबाट निस्किएका थिए ।
सामाजिक कार्यमा बढी सक्रिय हुने सञ्जीवलाई घरबाट निस्कदा आमा राधिका भण्डारीले सोमबार जसरी पनि घर आउन भनेकी थिइन । सोमबार एउटा जग्गाको विवादका बारे कुरा गर्नु थियो ।
तर, सोमबार सञ्जीव घर आएनन् । ‘आज कार्यक्रममा गएर व्यस्त भए । अब भोलि (मंगलबार) मात्रै घर आउँछु,’ सोमबार साँझ फोनमा कुरा हुँदा सञ्जीवले आमा राधिकासँग भनेका थिए ।
मंगलबार बिहान सञ्जीव नपुग्दै उनीबारे एउटा अप्रिय खबर आमा राधिकासम्म आइपुग्यो । पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० कै युवराज बास्कोटाले मंगलबार बिहान ७ः३० बजेतिर राधिकालाई फोन गरेर जतिसक्दो छिटो आफ्नो घरमा आउन भने ।
सञ्जीव विगत केही महिनादेखि युवराजसँगै हिँडडुल गर्नेदेखि उनकै घरमा बस्ने समेत गर्थे । सोमबार साँझ पनि सञ्जीव युवराजकै घरमा बसेका थिए ।
युवराजले किन आफूलाई बोलाएका होलान् भनेर बुझ्न उनले छोरा सञ्जीवको मोबाइलमा फोन गरिन् । दुईवटै (एनटीसी र एनसेलको) नम्बरमा सम्पर्क गर्दा घण्टी गयो, तर सञ्जीवको फोन उठेन ।
सञ्जीवले फोन नउठाएपछि राधिकाले पुनः युवराजलाई नै फोन गरिन् । ‘त्यो भण्डारी केटो (आफ्नो छोरा सञ्जीव)लाई फोन उठाउन भनि दिनु न । त्यसले मेरो फोन उठाएन, किन होला ?’ राधिकाले युवराजलाई फोनबाटै सोधिन् ।
‘उ (सञ्जीव) फोन उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन दिदी, उ बिरामी परेको छ,’ युवराजले राधिकालाई भने ।
‘छोरो बिरामी परेको’ भन्ने खबरले राधिका आत्तिइन् । हतार–हतार दराजबाट करिब ५० हजार रुपैयाँ निकालिन् र युवराजको घरतर्फ लागिन् ।
आफ्नो घरबाट निस्केको करिब आधा घण्टापछि युवराजको घर पुग्दा बाहिर मानिसहरुको भीड थियो । प्रहरीदेखि नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडासदस्य त्यहाँ थिए ।
मृतावस्थामा फेला परेका सञ्जीव
आफ्नो छोरो राति सुतेको (युवराज खतिवडाको) घर अगाडि जम्मा भएको भीड देखेरै राधिकाको मनमा चिसो पसिकेको थियो– कतै मेरो छोरालाई पो केही भयो कि !
उनी हतार–हतार घरको गेट भित्र पसिन् । गेट भित्र पस्दा देखिएको दृश्यले उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।
सञ्जीवलाई भूइँमा सुताइएको थियो । मानिसहरु सञ्जीवतर्फ देखाउँदै अब शव पोस्टमार्टमका लागि लैजानु पर्छ भन्दै थिए । ‘के, कसरी, किन, कहिले ?’ उनलाई पत्तै थिएन । तर, उनका अगाडि छोराको शव थियो ।
प्रहरी कर्मचारीले राधिकालाई मुचुल्कामा सही छाप गराउन खोज्दै थिए । तर, उनले मानिनन् । आफन्तहरु आएपछि मात्रै, घटना के–कसरी भएको हो भन्ने कुरा थाहा पाएर मात्रै आफूले कागजमा सही गर्ने राधिकाले अडान लिइन् ।
केही समयपछि आफन्त पनि आइपुगे । प्रहरीले मुचुल्कामा सही गरायो । सञ्जीवको शव ‘पोको पारेर’ पोस्टमार्टमका लागि लगियो ।
उमेरले १८ वर्ष पार गर्न लागेका सञ्जीव नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्थे । पढाइमा राम्रै अंक ल्याउने उनी सानै उमेर (विद्यालय तह)देखि नै सामाजिक कार्यमा सरिक हुन्थे ।
खासगरी बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा र ज्यादतिको खुलेर विरोध गर्थे । गाउँमा कोही कतै हिंसाको शिकार भयो भने पनि उनी आफैं प्रहरीमा सूचना दिन जान्थे ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण गत चैतदेखि क्याम्पस बन्द भएपछि उनी काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएका थिए ।
लकडाउन हुँदासम्म उनी घरमै बसे । तर, लकडाउन खुलेपछि भने उनी पुनः सामाजिक काममा सक्रिय हुन थाले । उनी जहिल्यै ‘एकजना दाई’ कोमा जानुछ भनेर घर बाट हिँड्थे । गत मंसिर २८ गते मात्रै उनले ती ‘एकजना दाई’ बारे घरमा जानकारी गराएका थिए ।
सञ्जीवले भन्ने गरेका ‘एकजना दाई’ थिए पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० कै बासिन्दा युवराज बास्कोटा ।
युवराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीति गर्ने व्यक्ति । विचार (कम्युनिस्ट सिद्धान्त) मिल्ने भएका कारण सञ्जीव पनि युवराजसँग नजिक थिए ।
उमेरले ५० कटेका युवराजले सञ्जीवलाई भाई भनेर बोलाउँथे । बिहानै ‘मोर्निङ वाक’मा जानुछ भनेर सञ्जीवलाई लिन युवराज उनकै घरमा पुग्थे, स्कुटी लिएर ।
पछिल्लो समय सञ्जीव पनि आफ्नो घरमा कम, युवराजको घरमा बढी बस्थे । उमेरमा पाको र सामाजिक रुपमा ‘राम्रै छवि’ बनाएको व्यक्ति भएका कारण पनि सञ्जीवका आमा–बुवालाई युवराजप्रति ‘त्यस्तो कुनै शंका’ थिएन ।
तर, अहिले आमा राधिकालाई लागेको छ– युवराजकै कारण छोरोको ज्यान गयो कि ! छोरा सञ्जीवको मृत्यु स्वभाविक नलाग्नुका कारण पनि छन्, राधिकाको हकमा !
अरु दिन छोरालाई ‘मर्निङ वाक’मा बोलाउन बिहानै ५–६ बजे नै स्कुटी लिएर आफ्नो घर अगाडि आउने युवराजले छोराको मृत्यु भइसक्दा समेत किन ढिला जानकारी दिए ?
युवराजसँग सञ्जीव, युएस आर्मी लेखिएको ज्याकेटमा
छोराको मृत्यु स्वभाविक हो भने गर्धन, छाती र पेट कसरी फुल्यो ? कान निलो कसरी भयो ?
शंका बढाउने अर्को कुरा पनि छ, युवराज र उनकी श्रीमतीकै कुरा बाझिनु ।
युवराजका अनुसार सञ्जीव मृत फेला पर्नुभन्दा अघिल्लो दिनको बेलुका खाना खाएर ‘राम्रैसँग’ सुतेका थिए । तर, युवराजकी श्रीमतीले भने अघिल्लो साँझ सञ्जीवले चाउचाउ मात्रै खाएर सुतेको बयान दिएकी छन्, प्रहरीसहित सबै स्थानीयको अगाडि ।
यी र यस्तै कुराले राधिकालाई आफ्नो छोराको मृत्यु स्वभाविक लागेको छैन । राधिका भन्छिन्, ‘मेरो छोराको हत्या भएको छ ।’
दैनिक अनलाइनसँग कुरा गर्दै राधिकाले युवराजविरुद्ध ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा किटानी जाहेरी दिएको बताइन् । तर, प्रहरीले भने घटनाको अनुसन्धानमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
यता युवराज बास्कोटा भने आफूलाई जवर्जस्ती ‘हत्यारा’को ट्याग लगाउन खोजिएको बताउँछन् ।
‘सञ्जीवले मलाई आफ्नो राजनीतिक अभिभावक मान्थे । मैले पनि ‘चेला’को रुपमा उनलाई सक्दो सहयोग गर्थेँ,’ दैनिक अनलाइनको सम्पर्कमा आएका युवराजले भने, ‘मैले किन कर्तव्य गरे हुँला, न उनी मेरो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्, न उनीसँग मेरो कुनै पारिवारिक, व्यावसायिक विवाद थियो । सञ्जीवको हकमा उनको परिवारजस्तै म पनि पीडित छु । मेरो घरमा घटना हुँदा मेरा परिवारका सदस्यलाई ठूलो चोट परेको छ । यो कुरा कसले बुझिदिने ?’
आफू नेकपाको कार्यकर्ता भएका कारण पनि घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर आफूलाई जबरजस्ती ‘अपराधी’ किटान गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ ।
हालै नेकपा (केपी ओली समूह)को केन्द्रीय सदस्य चयन भएका युवराज भन्छन्, ‘म नेकपा कार्यकर्ता र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको समर्थक भएकाले जबरजस्ती आरोप लगाइँदै छ ।’
प्रहरी भन्छ– अनुसन्धान जारी छ
सञ्जीवको मृत्युबारे जानकारी लिन खोज्दा ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दीलिप कुमार गिरीले अहिले अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
घटनास्थलमा मुचुल्का संकलनसहित प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम भएको बताउने डीएसपी गिरीले दैनिक अनलाइनसँग भने, ‘अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । अनुसन्धानकै चरणमा रहेको विषयमा धेरै कुरा बोल्न पनि उपयुक्त हुँदैन ।’
डीएसपी गिरीका अनुसार शव परीक्षणका क्रममा सञ्जीवको टाउकोको नशा फुटेको देखिएको छ । यद्यपि टाकाको नशा फुटेकै कारणले मात्रै मृत्यु भएको हो भन्ने विषय भने यकीन भइनसकेको उनी बताउँछन् ।
‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सञ्जीवको शव परीक्षण गरिएको हो । शव परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरुले टाउकोको नशा फुटेको देखिएको भनेर भन्नुभएको छ । तर, कज अफ डेथ (मृत्युको कारण)बारे भने उहाँहरुले थप परीक्षण गर्ने भन्नु भएको छ । थप परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरेरै अन्तिम संस्कारका लागि शव परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।’
दैनिक अनलाइनले मंगलबार (पुस २३ गते) सम्पर्क गर्दा डीएसपी गिरीले शव परीक्षणको पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेको जानकारी दिएका थिए । पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त भएपछि र मृत्युको कारण खुलेपछि थप अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
तर, स्थानीयहरु भने प्रहरी अनुसन्धानप्रति शंका व्यक्त गर्छन् । पीडित पक्षको कुनै कुरा नै नसुन्ने, उजुरी दिँदा ‘रित पुगेको छैन भन्दै’ फर्काउने गर्नाले पनि प्रहरीको भूमिका झन् शंकास्पद बन्दै गएको स्थानीय उपेन्द्र विष्टको भनाइ छ ।
‘प्रहरीको अनुसन्धान एकदमै फितलो देखिएको छ । पीडित पक्षको कुरा नै नसुन्ने, उजुरी लिन नमान्ने जस्ता व्यवहारले प्रहरीको भूमिकाप्रति शंका बढाएको छ,’ विष्टले दैनिक अनलाइनसँग भने, ‘हाम्रो माग भनेको निष्पक्ष छानबिन होस् । पीडित परिवारको पीडालाई बुझेर प्रहरीले कानून अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने हो ।’
आइतबार (पुस १२ गते) बिहान घरबाट निस्किएका सञ्जीवसँग आमा राधिकाको दिउँसो एकछिन भेट भएको थियो । आफन्त पर्ने एकजना युवकको विहेको कुरा छिन्न जाँदा सञ्जीव पनि सँगै गएका थिए, युवतीको घरसम्म ।
‘म पनि भाउजु हेर्नु जान्छु भनेर केटी (युवती)को घरसम्म पुगेको थियो,’ आँसु झार्दै राधिकाले सुनाइन्, ‘उसलाई पनि केटी मन परेकी थिइन् सायद, भाउजु राम्रो हुनुहुन्छ भन्थ्यो । हाँसी खुसी छुट्टिएको थियो । तर, दोस्रो दिन…, मेरो छोरो…. मेरो सिङ्गै मुटु कसैले चुँडालिदियो बाबु…!’
संसद विघटनको मुद्दा – किन लम्बियो बहस ?